ProphetDay Archives - News @ M-Media
Post Tagged with: "ProphetDay"
ပြည်မြို့ရှိ တမန်တော်နေ့ပွဲ ကန့်ကွက်ခဲ့သူများကို ဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုဖြင့် တရားစွဲမည်
ဇန်နဝါရီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၇ ကောင်းမြတ်မင်း / ဧရာဝတီ ပြည်မြို့ ရွာဘဲနယ်မြေ စည်တော်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ရှိ ဗလီတွင် ၁၄၉၁ နှစ်မြောက် တမန်တော်မွေးနေ့ကျင်းပမည့်ကိစ္စကို ကန့်ကွက်ခဲ့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အမျိုးသား ညွှန့်ပေါင်း အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်သူ[Read More…]
ပြည်မြို့မှာ ကျင်းပမည့် တမန်တော်နေ့ပွဲ အပိတ်ခံရ
ဇန်နဝါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၁၇ ဧရာဝတီမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ ပြည်မြို့၌ ယနေ့ပြုလုပ်မည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ “၁၉၄၁ ကြိမ်မြောက် တမန်တော်နေ့”အား ရန်ကုန်အခြေစိုက် မျိုးချစ်ပရဟိတအဖွဲ့မှ လာရောက် ကန့်ကွက်သည့်အတွက် ပွဲဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်။ ယမန့်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ပွဲဖျက်သိမ်းရန်[Read More…]
January 15, 2017 — မြန်မာသတင်း
တမန်တော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ပြင်ဦးလွင်မှာ ဘာသာပေါင်းစုံ စုပေါင်းသွေးလှူ
ဇန်နဝါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၁၇ M-Media သတင်း-သီဟ . (၁၄၉၁)နှစ်မြောက် တမန်တော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဘာသာပေါင်းစုံ စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ တရပ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ . ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ[Read More…]
January 12, 2017 — မြန်မာသတင်း